Nhau - Kupindirana neNaturepoly Muvambi Luna nezve yedu PLA Straw
Kupindirana neNaturepoly Muvambi Luna nezve yedu PLA Straw
Q1: Chii chinonzi PLA?
Luna: PLA inomirira Polylactic Acid. Iyo inogadzirwa, pasi peanodzorwa mamiriro kubva kune yakaviriswa chirimwa senge chibage starch, mufarinya, nzimbe uye shuga beet pulp. Iyo yakajeka uye yakaoma.
Q2: Zvigadzirwa zvako zvinogadziriswa here?
Luna: Ehe. Isu tinopa zvigadzirwa zvakasarudzika, senge yekudhinda logo, graphic dhizaini uye maslogani pane huswa, mavara ane mashanga anoenderana neepantone ruvara rwunotsanangurwa nemutengi. Iko kune zvakare yakawedzeredzwa vhezheni yePLA mashanga kuve nechokwadi chekuti vanogona kupinda mukati mefirimu inovhara zvingaraswa makapu, zvakanyatsogadzirirwa vedu bubble-tii-shopu vatengi.
Q3: Pasa mashanga angashandiswa kupi?
Luna: Bubble tii zvitoro, kofi zvitoro, mabhawa, makirabhu, kudzora, kumba uye mapato.
Q4: Mashanga anogadzirwa nehutachiona ari kugadzira nhoroondo, nyika ichichinja kubva kune imwechete yekushandisa plastiki (SUP). Ndedzipi dzimwe nzira dzekuvandudza dzeSUP dzawakatichengetera?
Luna: Kuderedzwa kwekushandisa mapurasitiki mumaresitorendi nedzimba dzetii hakuna kukwana. Isu takaona kudiwa kwe eco-hushamwari mhinduro mune yeindasitiri mashanga chidimbu, senge diki U-yakaumbwa uye teresikopu mashanga akasungirirwa kune vana muto nemukaka mabhokisi.
Zvaireva kukunda matambudziko ekugadzira iyo diki saizi ye 0.29 inches / 7.5 mamirimita uye nekuvandudza yakaomesesa PLA nzira yemashanga akasimba ayo anogona kubaya kuburikidza nechisimbiso chechidhakwa bhokisi. Kunze kwezvo, isu tiri pakati pevatangi vekutanga munyika vanopa kupisa-kusagadzikana PLA mashanga. Mashanga edu anogona kuramba tembiricha inosvika 80 ° Celsius.
Q5: mashanga anotora nguva yakareba sei kudzikisira?
Luna: Iyo biodegradability uye compostability yezvigadzirwa zvedu zvakapasa bvunzo dzinoitwa neTUV Austria, Bureau Vitas uye FDA. Munzvimbo yekugadzira indasitiri, mashanga anotsemuka zvachose mumazuva zana nemakumi masere.
Munzvimbo yekuumba manyowa, mashanga ePLA anodzikisira zvachose mukati memakore maviri. (Kompositi ine tsvina yekicheni).
Munzvimbo yakasikwa, mashanga anotora makore angangoita matatu kusvika mashanu kuti ashorese zvakakwana.
Q6: Hush-resisitantant ingaite yako PLA mashanga kuva?
Luna: Iyo yakanyanya kupisa-inodziya tembiricha yeedu PLA mashanga iri 80 ° Celsius.